စစ် မဖြစ်ရာ မြေ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
hats of to sayar kan. all the best for his birthday
မမိုးချိုရေးထားတဲ့သီချင်းတွေကိုဖတ်မိပြီး ငယ်တုန်းက ဘ၀လေးကို စိတ်က ပြန်ရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းတွေကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာ။ အခုထိလည်း ကြိုက်တုန်းပါပဲလေ။ မောင့်အရိုင်းပန်း သီချင်းစာသားကို ရေးတုန်းက သီချင်းရေးသူအနေနဲ့ဘယ်လိုများ ခံစား ရေးဖွဲ့ခဲ့သလဲလို့ သီချင်းညည်းမိတိုင်း တွေးခဲ့မိတာ။ သီချင်းရေးတဲ့သူတွေ၊ ကဗျာတွေ စာတွေရေးတဲ့သူတွေရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကိုတော့ လုလု လိုက်မမီပါ။ သူတို့အားလုံး အားကျမိတာတော့ အမှန်တကယ်ပါ။
အဲဒီသီချင်းတွေ တော်တော်များများကို ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတယ် အစ်မရေ။ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်ကို လည်းကြိုက်တယ်။ သီချင်း၁၀၀၀ ကျော်တောင် ရေးခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရတော့ အံ့သြချီးကျူးမိတယ်။ အစ်မပြောသလိုပဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးဖို့က မလွယ်လှပါဘူး။
အမရေးပြလိုက်တော့ ပိုပြီး ခံစားသွားမိတယ်။
သီချင်းက အခုအချိန်နဲ့ဆို ပိုလို့တောင်ကိုက်သေးတယ်နော်။
အမရေ.... စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးပြီး စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ လူဖြစ်လာတဲ့သူမို့ အခုထိ ကြိုက်နေဆဲ၊ နားထောင်မိဆဲပါဗျာ။ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ် နဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားသော နိဗ္ဗာန်ဘုံကတော့ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်နေတယ်ဗျ။
ခြင်္သေင့်္လည်ပြန် ကျွန်မလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်
TV မှာ ရင်ဂို ပြန်ဆိုတာ လွှင့်တာနဲ့ ကြုံတုန်း tape နဲ့တောင် ဖမ်းကူးထားသေးတာ။ သီချင်းလေးဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေး ဖတ်ဖူးတယ်။
ခုလောလောဆယ် ရေးနေတဲ့စာ အခန်းဆက်ကြီးကိုလည်း ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ အချစ်ကို ဦးစားပေးခဲ့သူ ညည်းရင်း ပျောက်သွားတဲ့ inspiration တွေ ပြန်ပြန်ရှာရတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ စစ်ပြေညိမ်းဖို့ စစ်အစိုးရ ကို အနိုင်တိုက်နိုင်မှ စစ်မဖြစ်ရာမြေ ဖြစ်လာမှာပါ ...
ချီးမွမ်းစရာ စကားလုံးရှာမတွေ့နိုင်အောင် ကောင်းလွန်းတယ် ...။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မမိုးချို ဘိုထီးသီချင်းဆိုနေတဲ့ပုံ
ကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တာ.. ဘယ်လိုမှ လွမ်းလို့မရတော့ဘူး... တွေးကြည်တာနဲ့ ရီချင်နေတယ် ......း)
မချိုသင်းရေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ညက စိုင်းထီးဆိုင်
သီချင်းတွေနားထောင်ဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်က ဒီသီချင်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဘ၀လေး ကို ပြန်တွေးပြီး
လွမ်းနေတုန်း မချိုသင်းရဲ့Post လေးဖတ်လိုက်ရလို့ 
ပိုလွမ်းသွားပြီ။ ဒီနေ့ ဒီဘက်မှာ မိုးအုံ့ နေတယ်။ အိမ်မှာလည်း တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ အခွေလေးထပ်နား
အရေးအခင်းတုန်းအဖမ်းခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေ တောခိုကျောင်းသားတွေ မက်မက်စပ်စပ် ဆိုခဲ့တဲ့ သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်ကို ပါပီမမှာ ထည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ တောင်အရမ်းမုန်းသွား ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခေတ်ရယ် စနစ်ရယ် လူနေမှုဘ၀တွေကို ဂီတနဲ့ဖော်ကျူးခဲ့တဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တကယ့် classic တွေပါ
မမကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေကို www.apytz.netလာရောက် တောင်းဆိုပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။
စိုင်းခမ်းလိတ် သီချင်းတွေ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ စာသားတွေနဲ့ချည်းပဲ။
ငယ်ငယ်ကဆို စိုင်းထီဆိုင် ရဲ့ သီချင်းတွေ နားထောင်ခဲ့ရတာများတယ်။
သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ် သီချင်းက ပေါ်လစီ သီချင်းအလုပ်ခံလိုက်ရတာ နှမျောစရာ.. ပြန်နားထောင်တော့ နားထောင်လို့ကောင်းနေတုန်းပဲ...
ငယ်ငယ်က ဘီနံပတ် OK0122L ကိုနားထောင်ပြီ ကိုယ်စက်ဘီးရဲ့ frame နံပတ် ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ လိုက်ရှာဖူးတယ် :D
ပျောက်ဆုံးနေသောနိဗ္ဗာန်ဘုံ လေးထဲမှာတော့ စစ် မဖြစ်တဲ့နေရာတွေ ရှိနေအုံးမယ်ထင်ရတယ် မချိုသင်းရေ။
ခုတော့ ငရဲ သာသာ ဒါမှမဟုတ် ငရဲလောက်နီးပါး မြေလေးမှာ နေထိုင် နေကြရသူတွေ အတွက် လွတ်မြောက်ရာ မြေ ...ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေပါလိမ့် မလည်း လို့အဖြေမသိတဲ့မေးခွန်းလေး ထုတ်ကြည့်ရင်း
ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းလေးတွေ အသက်ဝင်လာမဲ့ အချိန်လေးကို မရေ ရာ စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေရတယ် ။
အမရေ ဒီသီချင်းတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တာ။ ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗာန်ဘုံကို အဒေါ်တွေက ဂစ်တာတီးရင် အမြဲထည့်ဆိုတယ်။ ငယ်ချစ်ဦးသီချင်းကို သူ့အရှေ့မှာ မဆိုရလို့ တားမြစ်တတ်တဲ့ အမကြီးတယောက်လည်း ရှိတယ်။ မောင့်လပြည့်ဝန်းကို မန်းလေး ရထားကြီးပေါ်မှာ တိုးတိုးလေး ညည်းရတာ လွမ်းသလိုလို။ သခင့်ဆီ အပြေးပြန်လာမည်ကို ခံစားချက်နဲ့ ဆိုကြတဲ့ အမတွေ အကိုကြီးတွေနဲ့လည်း တူတူကြီးပြင်းခဲ့ရသေးတာ။ တခါလေ နေရာတိုင်းမှာကို ကိုယ့်ဘာသာ ညည်းနေတယ်။
ပခြုပ်ဆိုင် ဆိုတာ ဘာလဲ အမ..
သီချင်းတပုဒ် လှလှပပ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရေးဖို့ ခဲယဉ်းသလို စာတပုဒ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖြစ်လာဖို့လည်း အတော်ခက်ခဲတာပါပဲ။
ရုပ်ရှင် တကား အောင်မြင်တဲ့ခါ မင်းသားမင်းသမီးက နာမည်ကြီးသွားတယ်။ အဲ့ဒီကားကို ရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာတို့ ဇာတ်ညွန်းရေးတဲ့သူတွေကြ တော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုခံရတာ အသိမှတ်ပြုခံရတာ ရှားတယ်။
ဒီလိုပဲ သီချင်းတွေ နာမည်ကြီးအောင်မြင်တဲ့ခါ အဆိုတော်ကိုသာ ၀ိုင်းအုံမြှောက်စားတတ်ကြပေမဲ့ သီချင်းရေးတဲ့သူတွေ တီးခတ်တဲ့သူတွေကတော့ မေ့လျော့ခံထားကြရတာ များတယ်လေ။
ဆရာခမ်းလိတ်ကတော့ ရှားရှားပါးပါး မေ့လျော့မခံရတဲ့ သီချင်းရေးဆရာပါ။ ဒါကလည်း သီချင်းတွေမှာတွေ့ ရ ခံစားရတဲ့ သူရဲ့ စေတနာ မေတ္တာ ခံစားမှုတွေ ကြောင့် ဖြစ်မယ်။
သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်လို သီချင်းဟာလည်း တကယ့်ကိုပဲ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ ရင်ကို ထိမှန်စေတဲ့ သီချင်းကို။
ဒီနေရာမှာတော့ ငြင်းခုံဖွယ်ရာမရှိ၊ ရင်ခုန်သံခြင်း တထပ်ထဲ ကျတယ်ပြောပြော ရင်ဘတ်ခြင်း ပလပ်တပ်ထားတယ်ပြောပြော၊ ထပ်တူထပ်မျှပါဘဲ။ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ စေတနာတွေ ပြန်ပြောင်းသတိရ မိအောင် ပြန်ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ KM
အပေါ်ပိုင်း သုံး လေး ပိုဒ်လောက်ပဲဖတ်ရသေးတယ်။ အမေ့ဆီဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး သီချင်းစာအုပ်လေးထွက်နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောတော့ အမေက သိပြီးနေပြီတဲ့... အမေ့အကြိုက်ဆုံး သီချင်းရေးဆရာနဲ့ အဆိုတော်ဆိုရင်တော့ စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ စိုင်းထီးစိုင်ပါပဲ။
ဒီရောက်တော့ myanamar mp3 album ကနေ စိုင်းထီးဆိုင် သီးချင်းတွေချည်းပဲ ကူးပြီး ဒီဗီဒီနဲ့ burn ပေးလိုက်သေးလိုက်တာ... အမေ့မှာ ၀မ်းသာလွန်းလို့ ရွှေရတဲ့ အတိုင်းဖြစ်နေတာ သတိရမိတယ်။ အပိုတချပ်ပါ ထပ်ကူးထားပါတဲ့ ... ဒီတချပ်ပျက်သွားရင် နားထောင်လို့ မရတော့မှစိုးလို့တဲ့...
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကြီး စစ်မဖြစ်ရာမြေ ဖြစ်လာမယ့် နေ့ တနေ့ ၊ ကမ္ဘာတည်မယ့် မေတ္တာတွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ မြေ ဖြစ်လာမယ့်နေ့ တနေ့ ၊ မိသားစုတိုင်း သီချင်းတွေ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ ခေါင်းခြင်းဆိုင်ပြီး သီဆိုခွင့်ရမယ့် နေ့ တနေ့ ကို ကျနော်တို့ အားလုံး မြင်ချင်တွေ့ ချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ သစ်ကို ဘယ်သူတွေက ဆောင်ယူလာမှာလဲ၊ ဖန်တီးပေးနိုင်မှာလဲ။ ဆရာခမ်းလိတ်ရဲ့ "နေ့ သစ်" သီချင်းလေး နားထောင်ပြီးတော့ လွမ်းမိပါတယ်။ KM
ဒီအချိန်မှာ သနားချစ်အဖြစ်... နှစ်သိမ့်ဆုလေးလောက်တော့...
စိုင်းခမ်းလိတ်.သီချင်းတွေ ကြိုက်တယ်။ နွဲံ့တင်နေရာကနေ ရင်ခုန်ခဲ့မိသေးဘူးတယ။်
ကိုယ်ရတာနဲ့ ... တင်းတိမ် ရောင့်ရဲ... ဟဲအယ်...
တခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်... အဲ့ဟယ်...
အပြစ်မရှိသေးတဲ့ ... ကလေးလေး ဘဝကို
ဟမ်. တို့ ၆၀ ရှိတာ လူတွေ သိကုန်ပါပေါ့။
P.Ti ရေ OK0122L စက်ဘီး frame နံပါတ်ဆိုတာ ထက် သေချာပြန်စီကြည့်ရင် look ၁၂ ရက် ၂ လ ပြည်ထောင်စုနေ့ (ပင်လုံစာချုပ်) ကိုပြောတာလို့ ကြားဘူးတယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်က ပျောက်ဆုံးသွားသော ဘီးကလေးပါ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပျောက်ဆုံးသွားသော ဘီးကလေးနဲ့ နှိုင်းခဲ့တယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်
သီချင်းစာအုပ်တွေ ထွက်သမျှ ၀ယ်သိမ်းတာ
ဒီတိုင်းလေးပဲ အိပ်ယာထဲမှာ ဟဲလိုက်
ရေချိုးခန်းမှာ ဟဲ လိုက်..း)
ဟေမာနေ၀င်း၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ မေဆွိ၊
အက်စ်ကဲနက်၊ တူးတူး၊ မင်းအောင်
စိတ်ပျော်လို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
စိတ်ညစ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်ဖျားပေါ်
အော်တိုရောက်လာခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ က
သိပ်တော့ မများ လှပါဘူး
အဲဒီထဲမှာ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်
မိုးလုံးမှိုင်း နဲ့ ပျံသာ ပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ
သီချင်းတွေ က ထိပ်ဆုံး က
ငယ်ဘ၀ တမ်းတမိပေါ့ ညီမ ရေ..
မမ ချိုသင်း ပြောတာနဲ့ စိုင်းထီးဆိုင် ကိုလွမ်းသွားပြီ...ဟုတ်တယ်..ဆရာဦးစိုင်းခမ်းလိတ်က အရမ်းတော်ပါတယ်..။ သူ့ သီချင်းလေးတွေ ဟာကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ကြီးတွေပါပဲ...ဒီခေတ်မှာတော့ မရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီ..။
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်သီချင်းတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ရေးသူတွေ ဘာကြောင့်မီအောင်မရေးနိုင်တော့တာလဲမသိ။ သူတို့ ၃ ၄ ခွေဆိုရင်သံစဉ်တွေထပ်နေပြီ။
ဆရာစိုင်းတို့ဆို သီချင်းတွေ ထောင်ချီမှာ ထပ်မနေဘူး။ အင်ထရိုနားထောင်တာနဲ့ သီချင်းကို သိသာတယ်။
အမပြောသလို စိုင်းခမ်းလိတ် စာသားတွေနဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ အဆိုဟာ တကယ်ကို နတ်ဖက်တဲ့ အတွဲပါပဲ..
ခံစားတတ်တဲက သူတိုင်း သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေကို မကြိုက်တဲ့သူမရှိဘူးလို့ ထင်တယ်နော်အမ..
ဆရာ့စာသားတွေထဲက ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှု့ နဲ့ စစ်မဖြစ်ရာမြေ ကိုအားလုံးပဲ မသိမသာတမျိုး သိသိသာသာတမျိုး တောင်းတနေကြတာတော့ သေချာတယ်အမရယ်.
မိသားစု အေးအေးလူလူနဲ့ သီချင်းတွေ အလှည့်ကျဆိုညည်းခဲ့တဲ့ ဘ၀လေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ နော်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ဖူးခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့တင် ကျေနပ်နေပျာ်ဖွယ်ရာပါ မမရယ်..။
ဟုတ်ပအမရယ်။ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေဟာ တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ တွေးစရာပါတဲ့ အရေးအသားတွေ လှပတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကြောင့် ငယ်ငယ်ဂီတာတီးတတ်စကထဲက ကြိုက်ခဲ့တာ။
ချိုသင်းတို့ မိသားစုလေးက အေးချမ်းလိုက်တာနော်..။
တို့တွေလည်း ဘီးနံပါတ်အိုကေသုညရယ်.ဘီးကလေးကိုစီးပြီး အချစ်ကလေးကို တင်ပြီး သီချင်းလေးတွေက ဖေဖေတို့ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေပေါ့... သိပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ နွဲ့တင်ရယ် သီချင်းကတော့ တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါခဲ့သေးတယ်..အဟဲ...
ပြောရင်းဆိုရင် ထပ်လွမ်းသွားလို့ သီချင်းတွေ ထပ်နားထောင်လိုက်ဦးမယ်..။
မောင့် အ၇ိုင်းပန်းက တကယ့် အဖြစ်အပျက် ကိုရေးထားတာလို့ ပြောတယ်ဗျ။
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် သီချင်းတွေကတော့ မကြိုက်တာ မရှိလောက်အောင်ကိုပါ....ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီး ထိုင်ပြောရင် တစ်ညနဲ့လည်း ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး...။အခုထိ သူ့သီချင်းတွေ အရူးအမူး နားထောင်နေဆဲ....။
I would like to argue to those who misunderstood aboutasong " The Wild Ones" which was used inafilm "Par Pi Ma" produced by Major Tin Thann Oo. They asked Sai Kham Leik to allow them for using that song in their propagating film. One of my senior person had seen that letter fromacomposer. A composer was unable to deny due to many reasons. But SK Leik never compose any policy song for them and when (Mya Wa Ti)made an interview with him in 1996 and asked him that we haven't seen your songs assiting to country( Tain Kyo Pyi Pyu). SK Leik replied strongly," All my songs are benefitting to people and country". Moreover,asong,"Mg'aYein Pann" was not composed by SK Leik but his sibling Late Sai Kham Thi. I would like to share you all SK Leik's poem.
We speak in the dark,
We whisper during the night;
For all this and after tomorrow,
To laugh in the open light.
Unfortunately, we haven't got the opportunities to listen and access many of his songs which are still waiting in the dark; such as,
The Most Beautiful Period of Salween
Passing by, Without Resting
A Story of Sai Hto Nao
Release Tai Literature
Be Patriotic Forever
The Land I Dream Of and so on.
I hope we could listen his everlasting songs in the open light one day.
" If you believe more tomorrow than today,
Then you can come to whereahope is the thing."
From " The Wild Ones"
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်တို့ ကိုနေဝင်းတို့ ဂီတအစပိုင်း ကာလ တပိုင်းတစ ကို မောင်သစ်မင်း ရဲ့ တေးမြုံငှက် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်က နောက်ပိုင်း ပြန်ထုတ်ဖြစ်လားတော့ မသိ၊ မထုတ်ဖြစ်ရင်တော့ တော်တော်လေး ရှားနေလောက်ပြီ။
စိုင်းထီးဆိုင်ကနေ ပါရမီရှင်ဆိုပြီးထွက်တာ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတာတွေ မဟုတ်တော့ အရသာ ပေါ့သွားတယ်။ အစ်မပြော ၂ယောက်ပေါင်းမှ နတ်ဖက်တဲ့ အတွဲဖြစ်မယ်။
ဒါနဲ့ နိစ္စဓူဝ လို့ ပေါင်းမယ်ထင်တယ်။
ကမ္ဘာမြေကို အုပ်စိုးဖို့ ဘယ်လောက်ကျနေ
ကိုယ်ဘွဲ့ရတော့ ရှာထားခဲ့တဲ့ ဒီအတတ်တွေ
အသုံးဝင်ပေမယ့် ဘယ်သူမှ မသုံးပေ
အတောင်အလက် ပြည့်ပြီးကာမှ ကောင်းကင်လိုင်စင် မရလို့
တို့များရဲ့ ဘဝဟာလေ တကယ့်လူမှန် နေရာမရှိတဲ့
ကျွန်တော် အဲဒီ သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဆင်ဆာငြိလို့ ထွက်ခွင့်မရလိုက်ဘူး ကြားတယ်။ နောက်မှ မွန်းအောင် ပြန်ဆိုတာ ကြားဖူးလိုက်တယ်။
ဂန္တ၀င်တွင်ရစ်မယ့် သီချင်းရေးဆရာကို ပြပါဆိုရင် သူ့ပဲ ပြစရာရှိတာပါ။ သူ့သီချင်းတွေ နားထောင်တဲ့အခါတိုင်း နူးညံ့ပြီး ဆွတ်ပျံ့တဲ့ အတွေးလေးတွေ ကွန့်မြူးခဲ့ရတာချည်းပဲ။ အကြိုက်တူပါတယ်..
"မျက်ရည် ကျပြီး လိုက်ခေါ်သူရယ် မရှိ
သေလိုက သေနိုင်၏ ရှင်လိုက ရှင်နိုင်၏"
" လူဆိုတာက တော်ရုံနဲ့ သေခဲ .. ကြာလာတော့လဲ ခံနိုင်ရည်နဲ့ ၀" ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေ ..။
“ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှု ရှာကာ ပျော်ရွှင်နေ” လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုထီး ရော..ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှု ကိုတွေ့သွားရဲ့လားမသိဘူး...။